sadarmuuqda su,aal kadhan - WELCOMETOMAAYLANGUAGEFORUM
↳ WELCOME TO MAAY LANGUAGE FORUM!
sadarmuuqda su,aal kadhan
maamud sheeg isaag
December 6th, 2004, 5:26 pm #1 2004-12-06T17:26
Marka hore waxaan inta ka salaamayaa dhamaan maamiliyaasha Arlaadi iyo dhamaan umada digil iyo mirifle
mida xigata anigoo brnaamijkaan la socon waxaana ka yara fahmay doodahaan horta walaal ninka maanta diidan maaymaay waa nin diidan digil iyo mirifle aniga nafsad ahaanteyda ma saadaalinkaro waxa kuu soo socda shaqsigaas oo diidan digil iyo mirifle.
Mida kale dhamaan umada digil iyo mirifle waxaan uga digayaa ninka hada sunta la wareegaayo oo ah c\_laahi yusuf inay iska ilaaliyaan oo ay kusuustaan haday damiir leeyihiin hadalkiisi ahaa somliya awood qaybsigeeda waa waa dir iyo daarood iyo hawiye digil iyo mirifle wax jiro ma ahan. marka waxaan aad u jeclaa inay xusuustaan hadalkaas oo uu yiri c\_laahi yusuf iyo kuwo kale oo badan oo aan hadalo ka heyno .
December 6th, 2004, 8:00 pm #2 2004-12-06T20:00
Maamuud Sheeg waad salaaman tahay, ka dib waxaan kula socodsiinaya in inta aadan Cabdullahi yusuf iyo kuwa la fikirka ah la gaarain waxaa haboon in wax laga qabto kuwa ummadda D/M kala qeybiyey oo hadana ay u dhasheen kuwaas oo kala yihiin shaatigaduud,shati madoobe,xaabsade,kiish buur saransoor iyo dhamaan dadka ku abtirsada Mirifle oo hal caqli wada noqday. Sababtana waxay tahay way iloobeen walaaltinimada ka dhaxeysa ayaga iyo Digil. Xumaatooyin aad u fara badan ayaa lagu sameeyey Digil gaar ahaan waqtiyadan haadan la joogo ee awood qeybsiga (politics). Aniga waxaan ahay qof u dhashay Digil, runtii aad baan uga caroodaa marka aan maqlo Digil iyo Mirifle. Yaan been la isku sheegin. Anaga (Digil) waxaan aaminsanahay in kuwiina Bay/bakool naga xiga aad rumeysan tihiin waxa la yiraahdo Digil. Sideed iyo Sagaal. Anaga (Digil) iyo idinka dhalasho ayaa inaga dhaxeysaa laakiin waxii haadan ka dambeeya nagama dhaxeyso wax qabad iyo siyaasadba. Idinka hotiina Alle, anagana sidaas oo kale. Ummad walba waxay leedahay dhul ay awoowayaashooda u sameeyeen Marka aad fikradiina 8 iyo 9 soo bedeshaan ayaa laga yaabaa in xiriir dhaqaale idinla yeelano, ka hore se ha la is xaq dhowro oo hortiina iska dhiciya.
Maamud Sheeg ha iga xanaaqin, waxii waaqici ah ayaan ka hadlay.
January 7th, 2005, 12:10 am #3 2005-01-07T00:10
September 20th, 2006, 10:56 pm #4 2006-09-20T22:56
November 16th, 2006, 7:03 pm #5 2006-11-16T19:03
November 13th, 2007, 7:48 am #6 2007-11-13T07:48
May 16th, 2008, 4:16 pm #7 2008-05-16T16:16
September 1st, 2008, 3:42 pm #8 2008-09-01T15:42
February 11th, 2009, 4:11 pm #9 2009-02-11T16:11
March 4th, 2009, 6:00 pm #10 2009-03-04T18:00